I-FactGem: Hlanganisa Imithombo Yedatha Ngamaminithi… Ayikho Ikhodi Edingekayo! | Martech Zone
I-FactGem: Hlanganisa Imithombo Yedatha Ngemizuzu… Ayikho Ikhodi Edingekayo!
NgeSonto, Okthoba 8, 2017 Douglas Karr
Idatha ikuma-silos. Ibhizinisi ne-IT bobabili bafuna umbono obumbene wedatha ukusiza ukunikeza izixazululo ezinkingeni zebhizinisi lanamuhla. Imibiko ehlinzeka ngemibono ebumbene kudatha ehlanganisiwe iyadingeka ukuze abantu bakwazi ukubheka ulwazi olubaluleke kakhulu ezinhlanganweni zabo futhi kuthuthukise ukuzethemba emandleni abo wokwenza nokuletha ulwazi olunembile olubalulekile empumelelweni yenkampani.
Idatha, noma kunjalo, isatshalaliswa kuzinhlelo eziningi zobudlelwano, amafrimu amakhulu, amasistimu wefayela, amadokhumenti ehhovisi, okunamathiselwe kwe-imeyili, nokuningi. Ngenxa yokuthi idatha ayihlanganisiwe futhi amabhizinisi asadinga imininingwane ebumbene, amabhizinisi enza ukuhlanganiswa kwe- “swivel-chair” futhi adale imibiko “yokubuka nokuqhathanisa”. Babuza isilo esisodwa bese bekopisha imiphumela ukuze baphumelele, babuze esinye isilo bese banamathisela idatha kaninginingi. Bayayiphinda le nqubo baze babe nokuthile okumelela umbiko abafuna ukuwudala. Lolu hlobo lokubika luhamba kancane, lwenziwa ngezandla, aluthembekile, futhi luyaphutha!
Iningi lezinhlangano liyavuma ukuthi amathuluzi nobuchwepheshe obudale inkinga yedatha yedatha abakwazi ukusetshenziswa kusixazululo. Ngenxa yalokho, kule minyaka embalwa edlule, sibonile ukwanda kwemininingwane yolwazi ye-NoSQL nobuchwepheshe busatshalaliswa ukusiza ukuhlanganisa idatha ngokushesha okukhulu nangokushesha okukhulu. Yize lezi zinqolobane ezintsha nezinamandla kunganciphisa isikhathi ekuhlanganiseni idatha uma kuqhathaniswa nezindlela zendabuko, konke kugxile kunjiniyela futhi kuletha nezinye izinselelo okufanele zinqotshwe uma kukhulunywa ngokuthola amakhono adingekayo ukuthuthukisa kanye sebenza nalobu buchwepheshe. Kunezithiyo eziningi ezitholakala kule nqubo kufaka phakathi ukubuyekeza ukuphathwa koshintsho nezinqubo zebhizinisi ukuze kuphumelele ukuletha imiphumela.
I-FactGem inikeza indlela yokuhlanganisa idatha ngaphandle kokubhala noma iyiphi ikhodi. Bakholelwa ukuthi kufanele kube nendlela elula yokuhlanganisa idatha, futhi ikhona. Bayidalile!
Ithimba lobunjiniyela kwaFactGem lithathe umthwalo wokusingatha ubunzima bokuhlanganiswa ukuze abasebenzisi bebhizinisi bangadingi. Manje, ingxoxo yokuhlanganiswa kwedatha akudingeki ukuthi iqale nge-IT. Njengomphumela, izinhlelo zokusebenza zokuhlanganiswa kwedatha ze-FactGem zingasetshenziswa ukuhlanganisa ngokushesha izingqimba zedatha ukuletha imibiko ehlanganisiwe kudatha enqanyuliwe ngaphambili.
Okusehlele ukuthi sixazulule le nkinga engenakwenzeka ngombono wobuchwepheshe, kepha lokho esikunikeza ngempela yisixazululo sebhizinisi. Umphathi omkhulu u-Megan Kvamme
Lapho kuhlanganiswa idatha, baqala ngokucabanga ukuthi idatha yakho isivele yenziwe imodeli. Abantu abahlakaniphe kakhulu enhlanganweni yakho, futhi mhlawumbe abathengisi othenge kubo izicelo nezisombululo, bakha lezi zinhlobo. Izinhlangano nobudlelwano obakhathalelayo futhi obufuna ukukuhlanganisa bukhoma kumasilos wakho wedatha. Kubukeka njengamakhasimende, ama-oda, okwenziwe, imikhiqizo, imigqa yomkhiqizo, abahlinzeki, izikhungo, nokuningi. Bafuna ukuvula imininingwane kulezi zinhlangano futhi babahlanganise babe ngumbiko oletha imininingwane emihle yebhizinisi. NgeFactGem, lo ngumsebenzi olula.
Uma ungadweba izinhlangano nobudlelwano benhlangano yakho ebhodini elimhlophe, ungasebenzisa i-FactGem ukuhlanganisa idatha yakho. Kulula kanjalo.
Ukuhlanganisa idatha ne-FactGem, qala nge-WhiteboardR. Kulolu hlelo lokusebenza, hudula bese uphonsa izinhlangano nobudlelwano ukudala imodeli enengqondo yedatha edidiyelwe ngo- “whiteboarding” it kusiphequluli. Ku-WhiteboardR, chaza ukuthi iziphi izimfanelo ofuna ukuzihlobanisa nebhizinisi ngalinye, futhi kuzofanela ukhombise okudingayo, njengoba ukudinga. Akudingeki wazi zonke izimfanelo ezihlotshaniswa nayo yonke ibhizinisi ngaphambi kokuqala. Awudingi ukwazi wonke ama-silos nemithombo ekugcineni ofuna ukuyihlanganisa. Umkhuba omuhle kakhulu ukuqala ngokwakha imodeli yama-silos ambalwa owaziyo ukuthi anganikeza umbiko obumbene - nenani elisheshayo ebhizinisini lakho. Imephu yezinhlangano zakho, izimfanelo zazo, nobudlelwano bazo komunye nomunye. Ungadala nemithetho yebhizinisi ukuze uchaze ukuthi yini eyenza ibhizinisi lihluke nokuthi ubukhulu bezobudlelwano balo kufanele bube kanjani maqondana nezinye izinhlangano ezihlobene. Lapho nje le modeli idaliwe, uthumela imodeli ukuze isetshenziswe ku-MappR.
Ngenkathi i-WhiteboardR ikuvumela ukuthi usebenzise uhlelo lokusebenza ukuchaza imodeli yebhizinisi edidiyelwe, ebumbene, ebanzi yebhizinisi, iMappR ikuvumela ukuthi udwebe imidwebo ehlukile yedatha kumodeli ebumbene ye-WhiteboardR. Ku-MappR, ungasampula umthombo wedatha bese uqala ukudala imephu. Ake sithi emthonjeni ovela esihlokweni esisodwa unemfanelo ukugcinwa futhi kwesinye isilo, unemfanelo ilungu_id, futhi uyazi ukuthi zombili lezi zibhekise kukhasimende. Nge-MappR, ungabeka imephu zombili lezi zimfanelo kusichasiso esihlanganisiwe ikhasimende_id usuvele uchaze kumodeli ehlanganisiwe ye-WhiteboardR. Lapho nje umaka izimfanelo ozikhathalelayo ngomthombo, i-MappR ingabe isingenisa amafayela kusuka kuleso silo futhi izohlanganiswa ngokuzenzakalela kumodeli ye-WhiteboardR futhi ibuzwe ngokushesha ngokubuka okuhlangene. Ungaqhubeka ngokufaka imephu yemithombo futhi ufake idatha ngale ndlela uze uhlanganise idatha oyifunayo yokubuka kwakho okuhlanganisiwe.
Nge-WhiteboardR ne-MappR, ungagcina, ugcine futhi uthumele amamodeli owakhayo. Lezi zinhlobo zinenani lokuthi ziba yindandatho yokusetshenziswa kwekhodi yokusiza ibhizinisi futhi i-IT idlulise ukuqonda kwayo ngemininingwane yenhlangano, ukuthi kufanele isetshenziswe kanjani, nokuthi isetshenziswa kanjani kuma-silos. Lezi zinhlobo zingasetshenziswa futhi ukusiza ukwazisa ukuthunyelwa kwedatha entsha kanye nokuqalisa kabusha izinhlelo zokusiza ukuqinisekisa impumelelo yazo.
Uma idatha isilayishiwe, i-BuildR ikuvumela ukuthi wakhe ngokushesha ideshibhodi elula, ebuzwayo kuyo yonke idatha yakho ehlanganisiwe kusiphequluli. I-ConnectR ikuvumela ukuthi usebenzise isixhumi sedatha yewebhu yeTableau namanye amathuluzi we-BI ukuze ukwazi ukusebenzisa la mathuluzi wokubika kudatha yakho manje ehlanganisiwe.
Ngoba i-FactGem iphakamisa ukusindiswa kokuhlanganiswa kwedatha, futhi ngoba kufanele ulingise futhi ubeke imephu okudingayo, njengoba ikudinga, ukuhlanganiswa kwedatha nokulethwa kokuqonda kushesha ngendlela emangalisayo. Ngabe lokhu kubukeka kanjani empilweni yangempela?
Nakhu Okuhlanganisa Ukuhlanganiswa Kwemininingwane Okujwayelekile kwe-FactGem:
Ngehlobo eledlule, umthengisi weFortune 500 waya kuFactgem, ecela usizo ngoba babesebenzisa iCRM enkulu futhi bedonsa imininingwane kwezinye izindawo ukuzama ukuthola ukuqonda. I-Chief Data Scientist yabo ibidinga ukuhlanganisa kalula imininingwane yezitolo, e-commerce kanye nedatha yamakhasimende ukuqonda ukuthi "Ngubani ikhasimende?"
I-FactGem ithembise ukulethwa emahoreni angama-24. Bakhe imodeli exhumene kuzo zonke izitolo nakumakhasimende, baveza ukuqonda okusha, futhi bakwenza ngamahora ayisithupha, hhayi ama-6! Manje . . . Ikhasimende # 24 ekuthengiseni lazalwa. Sebesukile ekubukeni idolobha elilodwa emahoreni ayisithupha beya ezweni lonke, ngaphezu kwezinkulungwane zezitolo, amashumi ezigidi zamakhasimende kanye nama-terabyte wedatha - futhi bakwenza konke lokhu emsebenzini wosuku. Abanye abasezitolo, izinsizakalo zezezimali, nakwezokukhiqiza manje sebeqala ukubona nokuthola izinzuzo zeFactGem ezinhlanganweni zabo.
Ubuchwepheshe buqhubekele phambili kwaze kwafika ezingeni lapho kungabe kusaba khona ukuphela konjiniyela. Ukuhlanganiswa kwedatha yanamuhla akunzima njengoba umnyango wakho we-IT ungathanda ukuthi ukholwe. I-CTO Clark Richey
Imodyuli ye-FactGem's WhiteboardR ixhuma imithombo yedatha engafani ngaphandle kokusebenzisa noma iyiphi ikhodi.
Vakashela i-FactGem ukuze ufunde kabanzi
Tags: UClark Richeyukuhlanganiswa kwedathaiqinisoUkuhlanganiswamaprUMegan Kvammeibhodi elimhlophe
I-Ziflow: Phatha Yonke Ingxenye Yokubuyekezwa Kwakho Okuqukethwe kanye Nenqubo Yokuvunyelwa
Sekuyisikhathi Seholide Futhi, Nawa Amaqhinga Ayishumi Okukhulisa Imiphumela Yakho